Symbl.ai: Madal horumarineed oo loogu talagalay Sirdoonka Wadahadalka | Martech Zone
Hantida ugu qiimaha badan ee ganacsigu waa wadahadalkeeda - labadaba wadahadalka gudaha ee shaqaalaha dhexdiisa iyo wadahadalka dakhliga dibadda ee dhaliya macaamiisha. Summad waa qayb dhammaystiran oo ah API-yada falanqeeya wada-hadalka aadanaha ee dabiiciga ah. Waxay siinaysaa horumariyeyaasha awood ay ku weyneeyaan is-dhexgalyadan kuna dhisaan khibrado macmiil aan caadi ahayn kanaal kasta - ha noqoto cod, muuqaal ama qoraal.
Summad waxaa lagu dhisay teknolojiyadda Contextual Conversation Intelligence (C2I), taasoo u saamaxaysa kuwa horumariya inay si dhakhso leh u dhexgalaan sirdoonka farsamada casriga ah ee ka baxsan ka baaraandegidda luqadda dabiiciga ah (NLP) iyo wada hadalka qoraalka. Symbl ahaan, horumariyeyaashu way otomatayn karaan gorfeynta macnaha guud ee wada sheekaysiga dabiiciga ah iyagoon tababaro / ereyo soo jeedin lahayn waxayna ku siin karaan mowduucyo kooban oo dhab ah, walxaha waxqabadka, dabagalka, fikradaha, iyo su'aalaha.
Symbl's API wuxuu na siinayaa shaqooyin aad u kala duwanaan si aan ugu dhisno khibrad kulan layaableh macaamiisheenna. Waxaan ku faraxsanahay inaan siino isticmaaleyaasheena aragtiyada kulanka otomaatigga ah iyo waxyaabaha waxqabadka ah ee sheygayaga 'Intermedia AnyMeeting and' oo waxaan rajeyneynaa khibradaha wada hadalka ee kala duwan ee aan awood siin doonno mustaqbalka.
Costin Tuculescu, VP ee Wadashaqeynta at Warbaahinta, oo ah hogaamiye isgaarsiineed midaysan iyo adeeg bixiye codsi daruur ah
Barxadku wuxuu ka baxsan yahay sanduuqa sanduuqyada loo adeegsan karo UI, mobilada SDK, isdhexgalka Twilio, iyo iskudhafyo badan oo API ah oo loogu talagalay taleefannada iyo barnaamijyada websaydhada.
Dhibaatada jirta, qalabka sirdoonka wada hadalka sida Symbl ayaa noqon kara mid waxtar badan leh, wax ka qabashada caqabadaha wax soo saar ee shaqada fog ee dhaqaalaha adduunka ee sii kordhaya. Kordhinta shaqaalaha durugsan, barmaamij la bar-bar dhigi karo oo ka caawin kara horumariyayaashu inay wax ku daraan oo ay gashadaan falanqaynta wadahadalka kaliya looma baahna, waa muhiim.
Astaamaha Symbl waxaa ka mid ah:
Falanqaynta hadalka - Aqoonsiga hadalka otomaatigga ah, kala-soocida hadalka ee badan, kala-ogaanshaha xukunka jumladaha, hakadka, shucuurta.
Falanqaynta Qoraalka Waxqabadka leh - Aragtida sida waxyaabaha Waxqabadka, dabagalka, fikradaha, su'aalaha, go'aannada oo ay weheliyaan mowduucyada la soo koobay ee wadahadalka.
Qalabyada UI ee la adeegsan karo - Barmaamijkii ugu horreeyay ee si buuxda barnaamij-u-barnaamij u ah wada hadalka sirta ah ee loo adeegsado aaladda 'UI widgets' si loo abuuro khibrad gundhig ahaan asalka u ah codsiyada.
Real-Time Dashboodyada - Aragtida heerka sare ee wada sheekaysiga dhammaan isticmaaleyaasha iyo ganacsiyada adoo adeegsanaya dashboorro-waqti-hore la sii dhisay.
Isdhaxgalka Qalabka Shaqada - Isku-darka la dheereyn karo iyadoo la adeegsanayo webhooks iyo wixii ka baxsan isku-xirnaanta sanduuqa kalandarka, emaylka iyo wixii intaa ka badan
Wadahadalka oo dhami waa kuwo hodan ku ah macluumaadka, aan qaabeysnayn, iyo macnaha guud. Si fudud u dhig, way adag yihiin. Illaa iyo hadda, kaliya ciriiri cufan, buug-gacmeed, iyo badiyaa ikhtiyaarrada u nugul khaladaadka ayaa la heli karaa si ay horumariyayaashu iyo shirkaduhu si wax ku ool ah uga jaraan sawaxan. Hadda, wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay uga gudbaan xaddidan ayaa loo heli karaa.
Symbl Sirdoonka Wadahadalka Tusaale:
Halkan waxaa ah tusaale ku saabsan soo-saarista wada-hadal u dhexeeya laba ka-qaybgalayaal halkaas oo mawduucyo kooban lagu bixiyo, qoraal, aragtiyo, iyo dabagal dhab ah oo la socda taariikhda iyo waqtiga.
Saxiix Koontada Calaamadaha
Tags: c2iSirdoonka Wadahadalka Macnaha guudnaso apisdkfalanqaynta hadalkacalaamadtaleefoonfalanqaynta qoraalkaTwiliocodka apiWeelka
Sida Loogu Aqoonsado Macaamiishaada B2B ee leh Qalabka Mashiinka